Yakawedzera Kureba Wiricheya - Mawiricheya eVakareba Vanhu
Zvese zvekuwedzera kureba mavhiripu: aka kumusoro kumashure kana kutsenhama mavhiripu
Wanga uchiziva here, kuti isu tine maviri akatsaurwa zvikamu zvakanangana nevanhu vakawedzera kureba? Dzvanya pane chero eiri pazasi ekubatanidza kuti uwane rumwe ruzivo pazvikamu zviviri izvi, kana tarisa iri pazasi vhidhiyo. Pane yechitatu sarudzo kana imwe yeiri pazasi isingashande kwauri, saka ramba wakatarisana.
KUTSANANGURA WHEELCHAIR vs. TENDA MUDZIMAI GIROSI
A wiricheya iyo yakagadzirirwa kureba kupfuura avhareji vanhu vachazoda kuve neakakura zvigaro kukwirisa kupfuura zvakajairwa, zvaizodawo kuve hwakareba furemu kukwirisa, uye zvakare ingangoda kuve nemarefu tsoka. Vakareba vanhu vanoona zvakaoma dzimwe nguva kuwana wiricheya iyo inokodzera mhando yavo yakakura yemuviri. mavhiripu izvo zvakagadzirirwa kuve zvakakurisa zvinorema uye zvine zororo rekumashure rinowedzera kanokwana kaviri saizi yakajairwa ye wiricheya. Chimiro cheiyo wiricheya inowanzo kuve hombe mukuwandisa kwete chete pamusoro pechiuno asiwo pazasi zvakare. Izvi zvinogona kunge zvakagadzirirwa mumwe munhu ari pamusoro pe5'11 uye zvichidarika.
Chimwe chezvinhu iwe chaunogona kuita kugara munhu akareba, ndeyekushambidza makumbo emakumbo etsoka kuenda kune yakaderera inogoneka mamiriro, izvi zvinobvumidza mushandisi zvakakwana gumbo kamuri kugadzira iyo yepamusoro wiricheya nzvimbo. Iyo nyaya neiyi ndeyekuti iwe unogona kumisikidza tsoka dzekutsika zvakadzikira zvekuti chero rudzi rwechimbichimbi shanduko mumatunhu epamusoro, uye iwe unogona kuzviwana iwe uchidonha kana tsoka dzako dzakatsika pasi pane imwe nguva. Kana aya mapoka ari pamusoro akange asingashande, saka ungangoda kutarisa kune yedu bariatric chikamu uye nekuwedzera ekumashure ekuzorora ekuwedzera kana kushambadza kwakawanda kukwirira ne tsika mhando yekuzorora kwemusoro uye / kana kuwedzerwa kumashure. Iko kune zvakare yakagadzirirwa mhando tsika mavhiripu kune zvaunoda.
Kune mamwe marudzi akasarudzika e mavhiripu, tarisa yedu ERGO FLXX uye BARRIATRIC CATEGORIES mamwe mashoko.
Chigaro Kureba uye wiricheya Kuchinja
Imwe nzira yekutenga yakakura wiricheya kugadzirisa kukwirira kwemushandisi ndeye kutenga macushion ane pakapetwa, mutiro wakareba kwazvo kubvumira mushandisi kamuri yavanoda kuti vakwanise miviri yavo pachigaro zvakanaka. Izvi zvaizoitwa kukwidziridza danho rakagara mushandisi, zvichireva kuti pane imwe nzvimbo pazasi pechigaro yekugarira makumbo avo makuru ezasi.
Rimwe dambudziko neiyi imwe nzira ndeyekuti kana iwe ukaedza kukodzera chigaro chako pasi petafura, ungatadza nehukuru chigaro pamutsago. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uchizogara patafura nechigaro chako, iwe unofanirwa kubvisa kosi yekuwedzera kubvumira muviri wako kuti uenzaniswe netafura.
Ntsoka hombe dzinogona zvakare kubatsira vashandisi varefu kuti vagadzikane kana vaisa tsoka. Dai tsoka dzako dzaive hombe saka ini ndaikurudzira kutarisa mukutenga mapaundi enzvimbo dzakakura. Dambudziko rega pane izvi nderekuti kana iwe ukapfuura nepakati pakamanikana nzvimbo, senge musuwo, zvigaro zvetsoka zvinogona kupinda munzira yekuti iwe upfuure nenzvimbo iyoyo.
Akareba murume wepanyika weds 5 - 8 mwenga
22 inch wiricheya
Heavy Duty Kupeta Simba Wiricheya Yevanhu Vakakura
Kutsamira mavhiripu zvakagadzirirwa kutendera munhu kuti agare zvakanaka pamakona ekuwedzera akachengeteka uye akasununguka. Inowanzo shandiswa pekugara kweakakomba hudyu ekuwedzera makondirakiti, orthostatic hypotension, uye kumanikidza kugovera zvakare kwekudzivirira kuparara kweganda.
Recliner mavhiripu shanda zvirinani ne Kukwidziridza Legrests (ELRs); makumbo uye tsoka dzemushandisi zvinogona zvakare kumiswazve kuitira kunyaradzwa uye hutano zvinobatsira. Iyo "ELRs" inosarudzika pane mamwe mamodheru uye zvakajairika pane vamwe. Ive neshuwa yekubvunza nezverudzii rwe ELR inonyanya kukodzera pekugara kwako uye chinzvimbo chinodiwa.
Pane vamwe mavhiripu iyi sarudzo saka ita chokwadi chekutarisa iyo sarudzo uye zvishongedzo kana uchitenga. Tilt mu Space mawiricheya inowanzo fungidzirwa kune avo vanotsvaga chakanakisa chigadzirwa mu yakagara pawiricheya or kurereka muchadenga wiricheya. Iyo MVP-502 Recliner ndiyo "yepamusoro pemutsara" Recliner wiricheya inowanikwa pamusika nhasi. Nekugara kwakasunga tambo uye nekumisikidza kumashure, inopawo patent ergonomic "V-Shape" zvigaro sisitimu inopa hukuru hwekunyaradza uye inoshandiswa zvakare se "chigaro chekurasa", ichidzivirira mushandisi kutsvedza kubva pachigaro achiri munzvimbo yakazara yekuzorora .
Zvakare, iyo MVP-502 ine yekutsanangudza pivot poindi yeiyo armrests uye ndiyo yega yakagara pawiricheya pamusika nhasi panowanikwa mawrestrests achiwedzera kuenda kumashure kweiyo wiricheya sezvo mushandisi akatsenhama. Izvi zvinokurudzira kumira kwakanaka uye zvinopa zvakasikwa armrest positioning kana mushandisi akatsvaga yakanaka yakatsenhama angled.